Iibso 100% Asalka Asalka Casaanka Tiger Balm ee Xanuunka Xanuunka - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
100% Red Tiger Balm Ointment Thailand Painkiller
$ 7.99 qiimaha joogtada ah $ 10.99
100% Asal Ahaanta Casaanka Tiger Balm Saliida Thailand Xanuun - Xasaasi gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Number Model: Tiger Balm
Xaaladda: Sanduuqa cusub, xiran yahay
Xirmada Asalka ah
Kala duwanaanta diiran ee boomaatada caadiga ah ee loo yaqaan 'Tiger Balm muscle pain cure painment' waxay ku habboon tahay murqaha murqaha iyo xanuunka. Waxay cadarkan xanuun-yareeya ee murqaha yareeya ayaa waliba si dhakhso leh uga shaqeeya xanaaqa inay u keento qaniinyada cayayaanka. Xoq aagga ay dhibaatadu saameysey si aad u dhinto xanuun, barar iyo raaxo-darrooyinka kale si dhakhso leh oo waxtar leh
Gargaar deg deg ah oo wax ku ool ah madax xanuunka, sanka cufan, qaniinyada cayayaanka, cuncun, murqo xanuun iyo xanuun, murgacasho iyo cuncun. Si tartiib ah ugu codso Tiger Balm aagga ay dhibaatadu gaadhay.
Gargaarka diirran ee xanuunka murqaha iyo cuncunka qaniinyada cayayaanka awgeed
Guryaha xanuun joojinta-degdegga ah
Waxay cadar ka sameysan tahay waxyaalaha dhirta ka sameysan
Digniin: Isticmaal dibadeed oo keliya.
Isticmaalka iyo Qiyaasta
Si tartiib ah ugu codso Tiger Balm aagga ay dhibaatadu gaadhay.
Isagu waa probado varias veces este producto y es muy bueno para los dolores muruqyada
Waxsoosaarka wanaagsan iyo bixinta dhakhso
My wax soo saarka dhakhso yimid. Alaabta ayaa laga soo daayay xirmada laakiin waxaan sidoo kale ku noolahay AZ, USA. Alaabada ayaa dib loo soo celiyay sidaa daraadeed waxaan siinayaa 5 isgaadhsiin iyo isfaham ku saabsan sheyga. Dhoofinta Degdega ah !!
Dhoofinta ayaa timid kadib maalmo 45 ah oo USA ah, kaliya alaabtu ma aysan imaan waqtigii loogu talagalay ilaalinta gaarsiinta alaabada. Waxaa lagama maarmaan ah in marka hore la sameeyo muddo ilaalin muddo dheer ah. Wax fiican.
Wax walbana way qummanaayeen! Aad baad u mahadsantahay. Aad u dhakhso badan oo si fiican u buuxan.